महर्षि भृगुले तीनै देवताको कसरी लिएका थिए परीक्षा ? - NepalKhoj
महर्षि भृगुले तीनै देवताको कसरी लिएका थिए परीक्षा ?
नेपालखोज २०७८ पुष २८ गते ५:००
महर्षि भृगु ब्रह्माका मानस पुत्र थिए । उनी सप्तर्षि मण्डलका ऋषि हुन् । उनी साउन र भाद्रपदमा सूर्य भगवान्‌को रथमा सवार हुन्छन् । कुनै समय सरस्वती नदीको किनारमा ऋषि–मुनिहरू भेला भए र यस विषयमा विवाद भयो कि ब्रह्माजी, शिवाजी र श्रीहरिमध्ये सर्वश्रेष्ठ को हो ?
यसबाट कुनै निष्कर्ष नआएको देखेर उनले त्रिमूर्ति परीक्षण गर्ने निर्णय गरे र यस कार्यको लागि ब्रह्माका मानस पुत्र महर्षि भृगुलाई नियुक्त गरे । भृगु पहिले ब्रह्माजीकहाँ गए । न झुकेन न त प्रशंसा नै गरे । यो देखेर ब्रह्माजी क्रोधित भए । अत्यधिक रिसले उनको अनुहार रातो भयो । उसको आँखामा अंगारो बल्न थाल्यो तर आफ्नो छोरो सम्झेर उसले मनको क्रोधलाई शान्त पार्यो ।
त्यहाँबाट महर्षि भृगु कैलाश गए । भगवान् महादेव, भगवान् महादेवले भृगु आउँदै गरेको देखे, त्यसैले उनी प्रसन्न भएर आफ्नो आसनबाट उठे र उनलाई अंगालो मार्न आफ्नो हात फैलाए । तर उनको परीक्षा गर्न भृगुमुनिले उनलाई अँगालो हाल्न इन्कार गरे र भने– ‘महादेव ! तिमीले सधैं वेद र धर्मको सीमा उल्लङ्घन गर्छौ ।
तिमीले दुष्ट र पापीहरूलाई दिएको वरदानले ब्रह्माण्डमा भयानक संकट निम्त्याउँछ । त्यसैले म तिम्रो अँगालो कहिल्यै स्वीकार गर्दिन । उनको कुरा सुनेर भगवान् शिव क्रोधले काँप्दै थिए । त्रिशुल लिएर उनलाई मार्न चाहने बित्तिकै भगवतीले धेरै मनाउदै उनको क्रोध शान्त गरिन् । यसपछि भृगुमुनि वैकुण्ठ लोकमा गए जब भगवान् श्रीहरि क्षीरसागरमा लक्ष्मीसँग आराम गरिरहेका थिए ।
निस्किने बित्तिकै भृगुले छातीमा धारिलो लात हाने । भक्त – वत्सल भगवान् विष्णु चाँडै आफ्नो आसनबाट उठे र उनलाई प्रणाम गर्दै र उनको खुट्टामा स्याहार गर्दै भने हे भगवान ! के तपाईको खुट्टामा चोट लाग्यो ? कृपया यो आसनमा आराम गर्नुहोस् । भगवान ! तिम्रो शुभ आगमनको मलाई थाहा थिएन । त्यसैले मैले तिमीलाई स्वागत गर्न सकिन ।
तिम्रो चरणको स्पर्शले तीर्थहरूलाई पवित्र बनाउँछ । आज म तिम्रो पाउको स्पर्शले धन्य भएको छु । भगवान विष्णुको यो मायालु व्यवहार देखेर महर्षि भृगुको आँखाबाट आँसु बग्न थाल्यो । त्यसपछि उनी ऋषिहरुकहाँ फर्किए र ब्रह्माजी, शिवाजी र श्रीहरिको सबै अनुभूतिहरु मलाई कताए । उनको अनुभव सुनेर सबै ऋषिहरु अचम्ममा परे र उनीहरुको सबै शङ्का हट्यो ।
त्यसबेलादेखि भगवान् विष्णुलाई सर्वश्रेष्ठ मानेर उनको पूजा गर्न थाले । वास्तवमा ती ऋषिहरूले आफ्नो लागि यस्तो लीला बनाएका होइनन्, मानवको शंका हटाउन मात्रै गरेका हुन् ।